aungmin - English to Burmese translator. Translation services in Advertising / Public Relations
Einme, Ayeyarwady, Myanmar
Local time: 20:28 MMT (GMT+6.5)
English to Burmese: Explaination for Ruler Application
Ruler app for your phone and tablet. Measure everything with beautiful screen ruler. Tap the screen to start using the best multi-touch measuring system and find size of all objects for free. Translation - Burmese
သင်၏ ဖုန်းနှင့် ကျောက်သင်ပုန်းတို့ကို တိုင်းတာရန် အသုံးပြုသော ပေတံ အပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်။ အရာရာတိုင်းကို
လှပတဲ့ ဖန်သားမျက်နှာပြင်ပေတံဖြင့် တိုင်းတာပါ။ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့် မျိုးစုံ-ထိတွေ့တိုင်းတာနိုင်သော စနစ်ကို စတင်
အသုံးပြုရန်အတွက် ဖန်သားမျက်နှာပြင်တွင် တပ်ဆင်ပြီး အရာဝထ္ထုအားလုံး၏ အရွယ်အစားကို အခမဲ့ ရှာဖွေပါ။
This is Aung Min, highly competence and experience translator and editor from Myanmar.
I have at least three year experiences in translating and editing various news, features, report and text books about politics, economics, entertainment, law, business, sports, entertainment and so on. My clients include Myanmar Minister of Commerce, NGOs, One Hour Translation Agency and UN.